Nooca cusub ee Docker Container 18.09 ayaa la yimid horumar cusub | Laga soo bilaabo Linux
Nooca cusub ee Docker Container 18.09 ayaa la imanaya horumarin cusub
Docker waa mashruuc il furan oo otomaatig ah geynta barnaamijyada ku jira konteynarrada software-ka, Iyadoo la siinayo lakab dheeri ah oo farsamaynta farsamaynta iyo otomatiga guud ahaan nidaamyada hawlgalka badan.
Docker wuxuu adeegsadaa astaamaha go'doominta kheyraadka ee kernel Linux, sida cgroups iyo magacyada boosaska si loogu oggolaado "konteenarro" madax bannaan.
Sidan oo kale, Docker wuxuu bixiyaa in konteenarradan ay ku dhex socdaan hal tusaale oo Linux ah, iyagoo ka fogaanaya dusha sare ee bilaabista iyo dayactirka mashiinnada farsamada.
Taageerada kernel-ka Linux ee loogu talagalay goobaha magacyada ayaa go'doominaya aragtida codsi ee ku saabsan deegaanka ay ka shaqeyso.
Oo ay ku jiraan geedaha geeddi-socodka, shabakadda, Aqoonsiga isticmaalaha, iyo nidaamyada faylalka lagu rakibay, halka kernel cgroups ay bixiyaan go'doomin kheyraad, oo ay ku jiraan CPU, xusuusta, xannibaadda I / O, iyo shabakad.
1 Nooca cusub ee Docker 18.09
1.1 Horumarinta BuildKit
2 Marka loo barbardhigo noocii hore
Nooca cusub ee Docker 18.09
Nooc ka mid ah Docker Go'doonsan Linux Maaraynta Qalabka Weelka Qalabka 18.09 ayaa la soo bandhigay, kaas oo waxay bixisaa API heer sare ah oo lagu maareynayo weelasha heerka go'doomin ee codsiyada shaqsiyeed.
Docker wuxuu kuu ogolaanayaa inaad bilowdo geedi socod aan macquul ahayn oo ku saabsan habka go'doominta ka dibna wareejinta iyo weelasha isku dhafan ee loogu talagalay geeddi-socodkan server-yada kale, adoo ka qaadaya dhammaan shaqooyinka abuurista, dayactirka, iyo dayactirka haamaha
Laga soo bilaabo Docker 18.09, waqtiga taageerada sii deynta ayaa ka faa'iideystay maaddaama horumariyayaashu ay ka kordheen 4 ilaa 7 bilood iyada oo ay ugu wacan tahay casriyeynta wareegga horumarka ee Daabacaha Bulshada ee Docker.
Mid kale oo ka mid ah qodobbada xoogga leh ee lagu muujinayo sii-deynta cusub ee Docker waa taas waqtiga shaqada aasaasiga ah ee maaraynta konteynarka ayaa la cusbooneysiiyay si loogu sii daayo 1.2 sii deynta.
Tani waxay dejisay adeegsiga farsamaynta maareynta weelka gRPC waxayna hubisay in lala jaanqaado barnaamijka 'Kubernetes 1.12' iyo in la wanaajiyo taageerada sawirada guud ee qaab dhismeedyada kala duwan (multi-arch).
Dhinaca kale, gudaha Docker 18.09 suurtagalnimada dhisme dib-u-dhisid cusub ayaa la ballaariyay (wuxuu bixiyaa shaqeynta amarka "docker build"). Si toos ah loogu sameeyo hawlgallada qashin ururinta ee ay taageerayaan bilowga shaqooyinka buullayda ah ee aan u baahnayn awoodda adeegsade xidid inta lagu jiro hawlgalka.
Docker 18.09 sidoo kale waxaa ku jira ikhtiyaarka ah in dib loo dhigo BuildKit. Tani waa naqshad dhisme cusub oo hagaajineysa waxqabadka, maareynta kaydinta, iyo ballaadhinta, iyada oo lagu darayo astaamo cusub oo muhiim ah.
Waxqabadka hagaajinta: BuildKit waxaa ka mid ah qaab isku xirnaan iyo dib u habeyn naqshadeyn ah oo ka dhigeysa mid aad u dhaqso badan, sax ah, oo la qaadi karo.
Isbedelkan iyo iswaafajinta qaab dhismeedka, sidoo kale Soosaarayaasha Docker hadda waxay u oggolaanayaan casriyayn ka timaadda mashiinka nooca bulshada ah iyo mashiinka 'Enterprise engine' oo leh ruqsad fudud oo firfircoon.
Isticmaalayaasha hadda ee nooca 'Docker Community', tallaabadani waxay ka dhigan tahay in la furayo astaamo badan oo amniga shirkadda ah iyo helitaanka marin-u-helidda taageerada heerka fasalka shirkadda iyo siyaasadaha dayactirka ee la dheereeyay.
Marka loo barbardhigo noocii hore
Nambarka waxaa loo habeeyay si loo abaabulo fulinta isku midka ah ee shaqada iyo qaabka keydinta ayaa la beddelay, taas oo suurta galisay in si weyn loo dardar galiyo shirkii.
Tusaale ahaan, markii la tijaabinayo mashruuca Dockerfile Moby set xawaaraha ayaa ka kordhay 2 ilaa 9,5 jeer sababo la xiriira fulinta isku mar oo heerar kala duwan ah, iyadoo la iska indhatirayo talaabooyinka aan la isticmaalin iyo faylalka xogta lagu kordhinayo inta udhaxeysa qaabka muuqaalka.
Lagudarey awooda lagudaro sirta Dockerfile iyo si badbaado leh ugu wareeji inta lagu gudajiro hawsha dhismaha, adigoon ku keydin sawirada ka soo baxa isla markaana aan lagu dhejin qafiska dhismaha.
Awoodda lagu gudbiyo ssh ssh-agent sockets, ayaa la hirgaliyay, tusaale ahaan, si loogu xiro keydadka gaarka loo leeyahay iyadoo la adeegsanayo xiriir jira iyadoo loo marayo wakiilka ssh.
Hadda khasnado ururinta waa la maamuli karaa, si ka duwan sawirrada.
Lagu daray amar cusub "docker builder prune" si loo nadiifiyo keydka iyo awooda lagu qeexo xeerarka nadaafadda iyo inbadan.
Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato waad booqan kartaa xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Nooca cusub ee Docker Container 18.09 ayaa la imanaya horumarin cusub
Laba nuglaansho ayaa lagu ogaadey Linux diidmada adeegga
LIBRECON 2018: falanqaynta wixii ka dhacay dhacdada